६ महिनापछि फेवातालमा डुंगा सरर…. — Bhaktapurpost.com
६ महिनापछि फेवातालमा डुंगा सरर….
पोखरा, ३ असोज । छ महिनादेखि बन्द भएको फेवातालमा शुक्रबारबाट डुंगा सचलनमा आएको छ । कोरोना भाइरस कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गरेपछि बन्द भएको डुंगा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर ६ महिनापछि डुंगा संचालनमा आएको फेवा डुंगा व्यवसायी समितिका सहसचिव रुद्र भुजेलले जानकारी दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर डुंगा संचालन गर्न अनुमती दिएको हो । डुंगा संचालनमा अनुमती दिए पनि फेवातालको मध्यभागमा रहेको प्रसिद्ध तालबाराही मन्दिर दर्शन गर्न र घुम्न जान भने रोक लगाइएको छ । डुंगामा मन्दिरमा जान भने पाइने छैन सहसचिव भुजेलले भने ।
डुंगामा फेवाताल सयर गर्दा एकै परिवारका वा संगै आएका साथी हुनु पर्ने छ। डुंगा घाटमै भेटिएर डुंगा सियर गरेर तालमा घुम्न जान पनि रोक लगाइएको उनले सुनाए । डुंगा चड्न आउने यात्रुहरुले अनिवार्य रुपमा माक्स लगाएको हुनु पर्ने छ । डुंगा चड्नु अघि ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजर प्रयोग गरिने छ ।
कोरोना संक्रमण नसरो भन्ने उद्देश्यले सामान्य अवस्थामा यात्रु चड्ने संख्या भन्दा आधा मात्र यात्रु डुंगामा सयर गर्न पाउने छन्। १८ फुटे डुंगामा ३ जना र २० फुुटे डुंगामा ४ जना यात्रु चड्न पाउने छन् । १० जना अट्ने प्याडलबोटमा ५ देखि ६ जना मात्र चड्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले सुनाए ।
लाइफ ज्याकेट पनि एक पटक प्रयोगमा आएपछि स्यानिटाइज गरेर राखिने छ । यसरी स्यानिटाइज गरेको जकेट भोली पल्ट मात्र प्रयोगमा ल्याइने पनि उनले बताए । डुंगा संचालनमा आए संगै लामो समय थन्कीएका डुंगा मर्मत, सरसफाई सुरुभएको छ ।
फेवातालको ८ डुंगा घाटमा गरेर कुल ७ सय डुंगा रहेको समितिका अध्यक्ष बुद्धिबहादुर नेपालीले जानकारी दिए । सबै भन्दा धेरै फेवातालको बिचमा रहेको तालबाराही मन्दिर जाने बाराही घाटमा ३ सय ५६ वटा डुंगा छन्। फेवातालमा ६ सय जनाले दैनिक डुंगा चलाएर जीवन निवार्हा गर्दै आएका थिए । सिजनमा बाराही घाटका सबै ३ सय ५६ वटा डुंगाले पालो पाउँने र अफसिजन असार साउनमा भने पर्यटक कम आउने भएकोले रोल ढिलो आउने व्यवसायीले बताएका छ । अन्नपूर्ण पोस्ट्बाट